စားလို့ကောင်းတဲ့ ငချိတ် က ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်နော် - Page 29 of 51 - Hello Sayarwon
စားလို့ကောင်းတဲ့ ငချိတ် က ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်နော်
ငချိတ် ပေါင်းကို အုန်းသီးလေးဖြူး နှမ်းထောင်းလေးနဲ့တို့လို့ မနက်ခင်းစောစောလေး စားလိုက်ရတဲ့ အရသာက တော်တော်လေးပြီးပြည့်စုံတယ်နော်။ ကောက်ညှင်းဆန်ညိုညိုလေးက စားလိုက်ရင် ဖောက်ဖောက်နဲ့ တော်တော် စားလို့ကောင်းတာပါ။ ဒီစားကောင်းတဲ့ ငချိတ်ပေါင်းလေးက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးတွေများသားနော်။
ငချိတ် ဆန်မှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက
ငချိတ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်လိုရီပမာဏက ရိုးရိုးဆန်နဲ့ ဆန်လုံးညိုတို့မှာပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်လိုရီပမာဏနဲ့ အတူတူပဲဆိုပေမယ့် ပရိုတင်းနဲ အမျှင်ဓာတ်က ပိုပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ပရိုတင်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားစေဖို့နဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ တစ်ရှူးတွေကို အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေးစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့လည်း အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေ၊ တစ်ရှူးတွေကို ကျန်းမာစေပြီး ဇီဝတွင်းဖြစ်စဉ်တွေကို ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းပမာဏရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်က နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်သလို ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့လည်း အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ အစာခြေစနစ်အတွက် အရေးပါသလို ဝမ်းမချုပ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အူမကြီးကင်ဆာ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
သွေးနီဥဆဲလ်တွေဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တစ်ခုပါ။ သံဓာတ်နည်းတဲ့အခါ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖလေဗာနွိုက် ပါဝင်နေသလို ငချိတ်ဆန်မှာ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဝလွန်တာ၊ နှလုံးရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ anthocyanin လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ကင်ဆာကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်လည်းရှိပါတယ်။
စားလို့ကောင်းတဲ့ ငချိတ် ပေါင်းလေးစားရင်း ရရှိမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
အကျိုးပြု ကိုလက်စထရောပမာဏကို တိုးစေနိုင်တယ်။
free radicalsတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တာကြောင့် ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ပါဝင်တာကြောင့် အသည်းကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
အရက်ကြောင့် အသည်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
စားလို့လည်းကောင်း အာဟာရဓာတ်တွေလည်းပြည့်ဝစွာပါဝင်နေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးပြုတယ်ဆိုမှာတော့ င….. ငချိတ်ပေါင်းစားလို့ကောင်းဆိုတာ တကယ်ပဲ မှန်တာပေါ့နော်။ Hello ဆရာဝန်ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးထဲက ငချိတ်ပေါင်းကြိုက်သူတွေအနေနဲ့လည်း မနက်စာကို ငချိတ်ပေါင်းလေးစားလို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရယူလိုက်ပါနော်။
What are the health benefits of purple rice? https://www.medicalnewstoday.com/articles/319958.php Accessed Date 28 March 2019
Purple Rice Nutrition https://www.livestrong.com/article/428811-purple-rice-nutrition/ Accesssed Date 28 March 2019
Should I Add Purple Rice to My Diet? https://www.healthline.com/health/purple-rice Accessed Date 28 March 2019